စနေမောင်မောင်: နနွင်းက ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ရှိသူများတွင် ကင်ဆာပြန့်ပွားမှုမှ ကာကွယ်နိုင်
ငါဆိုတာ ဘယ်မှာလဲး... ၃၂ ပါသော အ ခြင်း ရာတွေသာရှိတာအစစ်မို.. .ခင်တွယ်စရာမရှိသလို.. .ချစ်ခြင်း မုန်ခြင်းလည်း မဖြစ်ချင်ပြီ.....
နနွင်းက ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ရှိသူများတွင် ကင်ဆာပြန့်ပွားမှုမှ ကာကွယ်နိုင်
နနွင်းမှုန့်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက အရိုးအဆစ်ရောင် ရောဂါနဲ့ တခြားရောဂါတွေကို ကုသဖို့ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ နနွင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ ကာကူမင်ဟာ ရောင်ရမ်းမှုကို တားမြစ်နိုင်တာကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခု ဂျာမနီနိုင်ငံက လေ့လာမှု အရလည်း နနွင်းဟာ ကင်ဆာပြန့်ပွားမှုကို တားမြစ် နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုအရ နနွင်းဟာ သားမြတ်ကင်ဆာ ရှိသူတွေကို အဆုတ်အတွင်း ပြန့်ပွားမှု မရှိအောင် တားမြစ် နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သားမြတ်ကင်ဆာနဲ့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဟာ နာတာရှည် ရောင်ရမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကင်ဆာ နှစ်မျိုးစလုံးရဲ့ ကင်ဆာဆဲလ် တွေက CXCL1 နဲ့ CXCL2 အပါအဝင် ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စေတဲ့ ပရိုတင်းတွေကို ထုတ်လုပ် ပေးတယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ကာကူမင်ဟာ အဲဒီပရိုတင်း နှစ်မျိုးရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နနွင်းမှုန့်ကို နေ့စဉ် ရှစ်ဂရမ်ထိ သောက်သုံး နိုင်ပါတယ်။ ဆီးကျိတ်ကြီး (BPH) တဲ့ အမျိုးသားတွေနဲ့ မိသားစုရာဇဝင်မှာ သားမြတ်ကင်ဆာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ နနွင်းကို ကင်ဆာရောဂါ ကာကွယ်ဖို့ အသုံးပြုထားသင့်ကြောင်း သုတေသီတွေက အကြံပေးထား ကြပါတယ်။
Posted by winpyaephyo at 4:30 AM
စာ အုပ် website များ စွာ ရဲ. အသစ်တင်တိုင်း ဖုန်း ဆီ ပိုပေးတဲ. ဖုန်း applications
Feb 16 (43)
အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ - အချစ်နဲ့ လိင်
အချစ်ဟာ ဘ၀အတွက် အဓိက လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပေမဲ့ အချစ်မရှိရင် ဘ၀မှာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာတွေလည်း ပျောက်ဆုံးကုန်ရော။ အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် လူတိုင်းမှာ ခ...
မိန်း​​မ​​ချောများ​​၏ ဝတ်လစ်စလစ်ပုံများ​​ ကြည့်​​ရှုခြင်း​​ဖြင့်​​ ဦး​​​နှောက်စွမ်း​​​ဆောင်ရည်တိုး​​မြှင့်​​နိုင်
နှစ်လိုဖွယ် မိန်း​​က​​လေး​​များ​​၏ ဝစ်လစ်စား​​လစ် ဓာတ်ပုံများ​​ကို ကြည့်​​ရှုခြင်း​​သည် ဦး​​​နှောက်၏ စွမ်း​​​ဆောင်ရည်များ​​ကို တိုး​​မြှ...
သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာများအားလုံးကို ဂါရ၀ပြုလျှက်
" သင်ဟာအမြဲတမ်း ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ "
စနေမောင်မောင်. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.